Ozi Ọma Anyị Na-ekwusa
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bislama Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fante Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Malayalam Mam Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tankarana Tarascan Telugu Tigrinya Tiv Tongan Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Vezo Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
N’afọ 2014, Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova haziri otú a ga-esi gaa zie ndị mmadụ ozi ọma nke ọma n’ime ime obodo ndị n’ebe ugwu Yurop na Amerịka. (Ọrụ Ndịozi 1:8) Obodo ndị e ji malite bụ obodo ụfọdụ dị n’Alaska nke dị n’Amerịka, Lapland nke dị na Finland, na Nunavut nakwa obodo ndị dị n’agbata ebe ugwu na ebe ọdịda anyanwụ Kanada.
Ọ bụghị taa ka Ndịàmà Jehova gawara ozi ọma n’obodo ndị ahụ. Ha gaa, ha anaghị anọte aka, ọ na-abụkarịkwa naanị akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl ka ha na-enye ndị mmadụ.
Ma, na nke ugbu a, alaka ụlọ ọrụ na-ahazi ozi ọma Ndịàmà Jehova na-ezi n’ime ime obodo ndị ahụ gwara Ndịàmà Jehova na-ezi ozi ọma oge niile (ndị ọsụ ụzọ oge niile) ka ha gaa zie ozi ọma n’ụfọdụ obodo ndị ahụ, ọ dịkarịa ala ọnwa atọ. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị obodo ahụ enwee mmasị ịmụ Baịbụl, ha nwere ike ịnọtụkwu, nweekwa ọmụmụ ihe.
Ma nke bụ́ eziokwu bụ na ịga zie ozi ọma n’ebe ndị ahụ adịghị mfe. E nwere ụmụnna nwoke abụọ bụ́ ndị ọsụ ụzọ oge niile e zigara n’obodo Baro, dị́ n’Alaska, ịga zie ozi ọma. Otu n’ime ha bibu n’ebe ndịda Kalịfọnịa, ebe onye nke ọzọ bi na Jọjia. N’oge ha ruru Baro, ebe ahụ jụbigara oyi ókè. Ma naanị n’ime ọnwa ole na ole ha rutere, ha gara ozi ọma n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ n’ụlọ niile dị n’ebe ahụ. Ha malitekwara ịmụrụ mmadụ anọ Baịbụl. Otu n’ime ha bụ otu nwa okorobịa aha ya bụ John. Ya na enyi ya nwaanyị na-amụ akwụkwọ Gịnị Ka Baịbụl Na-akụziri Anyị? John na-akọrọ ndị enyi ya na ndị ha na ya na-arụkọ ọrụ ihe ndị ọ na-amụta na Baịbụl. Ọ na-agakwa na JW Library app nke dị n’ekwentị ya agụ ihe mmụta dịịrị ụbọchị.
E nweghị ụzọ e si aga obere agwaetiti a na-akpọ Rankin nke dị́ na Nunavut dị́ na Kanada. N’ihi ya, ndị ọsụ ụzọ abụọ ji ụgbọ elu gaa n’obere obodo ahụ ma malite ịmụrụ ọtụtụ ndị Baịbụl. Mgbe otu nwoke lechara vidio anyị bụ́ Gịnị Ka A Na-eme n’Ụlọ Nzukọ Alaeze? ọ jụrụ ha mgbe ha ga-abịa rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’obodo ha. O kwuru, sị, “Ọ bụrụ na m ka ga-anọ ya mgbe unu ga-arụ ya, m ga na-abịa ọmụmụ ihe.”
E nwere ndị ọsụ ụzọ e zigara izi ozi ọma na Savukoski dị́ na Finland. Mgbada e nwere n’obodo a ji okpukpu iri karịa ndị bí na ya. Ndị ọsụ ụzọ ahụ kwuru, sị: “Ezigbo oyi na-atụ ebe a, snoo na-adakwa nke ukwuu.” Ma, ha kwuru na oge ahụ ha bịara dị nnọọ mma. Gịnị mere ha ji kwuo otú ahụ? Ihe mere ha ji kwuo ya bụ na ha ziri ozi ọma nke ọma n’obodo ahụ niile. Ndị mmadụ na-ekpochapụ snoo n’ụzọ ndị e si aga n’ime ime obodo ndị dị ebe ahụ, si otú ahụ mee ka ụzọ kwe ọgịga. Oké oyi ahụ na-atụnụ mekwara ka ọtụtụ ndị nọrọ n’ụlọ.
Mbọ anyị gbara izi ọtụtụ ndị bí n’ime ime obodo ndị ahụ ozi ọma mere ka ọtụtụ ndị mara anyị. Mgbe ndị ọsụ ụzọ abụọ gachara na nke onyeisi nke otu obodo dị n’Alaska, onyeisi ahụ kwuru okwu ọma banyere ozi ọma ha ziri ya n’akwụkwọ akụkọ, meekwa ka traktị anyị bụ́ Gịnị Bụ Alaeze Chineke? gbaa na ya.
N’obodo Heins dị́ n’Alaska, e nwere mgbe ihe dị ka mmadụ asatọ bịara soro ndị ọsụ ụzọ abụọ nwee ọmụmụ ihe e nwere n’ọ́bá akwụkwọ ọhaneze. Mgbe e mechara, otu akwụkwọ akụkọ a na-ebipụta n’obodo ahụ kwuru na ụmụ nwoke abụọ sí Teksas na Nọt Karolaịna na-aga n’ụlọ ndị mmadụ amụrụ ha Baịbụl otu otu. Ihe akwụkwọ akụkọ ahụ ji mechie bụ: “Gaa na jw.org ka ị matakwuo.”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Izi Ndị Bí n’Ime Ime Obodo Ndị Dị́ n’Ebe Ugwu Ozi Ọma
Izi Ndị Nwe Obodo Kanada Ozi Ọma